के मोटरसाइकल विन्डशील्ड सकेसम्म उच्च छ? यसको फाइदा र बेफाइदा के हो? मोटरसाइकल पार्टी हेर्नुहोस्!
के मोटरसाइकल विन्डशील्ड सकेसम्म उच्च छ? यसको फाइदा र बेफाइदा के हो? मोटरसाइकल पार्टी हेर्नुहोस्! मोटरसाइकलको विन्डशील्डलाई मूल कारखाना र सहायक कारखानामा विभाजित गरिएको छ। सामान्यतया, मूल कारखानाको साथ मोटरसाइकलको विन्डशील्ड मुख्य रूपमा हुन्छ ...
उत्पादनको बारेमा थप पढ्नुहोस्
१ 197 66 मा, बीएमडब्ल्यूले आर १०० आरएसमा निश्चित विन्डशील्ड स्थापना गर्न नेतृत्व गर्यो, जसले मोटरसाइकल उद्योगको ध्यानाकर्षण गर्‍यो। त्यसबेलादेखि विन्डशिल्ड व्यापक रूपमा अपनाइएको छ। विन्डशील्डको भूमिका सवारीको आकारलाई अझ सुन्दर बनाउन, हावा पुनःलाई कम गर्नु हो ...
१. हावा संरक्षण कारण नम्बर १ एक दिमाग नभएको जस्तो देखिन्छ। मेरो भनाइको मतलब यो हो कि तिनीहरू हावाबाट तपाईंलाई बचाउनको लागि डिजाइन गरिएको हो। तिनीहरू तपाईंको मोटरसाइकल वरिपरि आउँदै गरेको हावा फैलाउन र अर्ननको लागि डिजाइन गरिएको हो ...
कसरी एक मोटरसाइकिल विन्डशील्ड स्टेप गाईड स्टेप गाईड सफा गर्ने?
Presoak सधैं ठूलो तौलिया वा नरम कपास कपडाको साथ ढाल presoak। तौलिया पानीले भिजेको हुनुपर्दछ र कवचलाई नरम बनाउन कम्तिमा minutes मिनेटसम्म ढालमा राख्नु पर्छ। तौलिया हटाउनुहोस् र शील्डको माथि पानी निचो गर्नुहोस् जब तपाईं हल्का ढ the्गबाट ​​मलबे डोव सार्नुहुन्छ ...
यो व्यावहारिक छ! व्यावहारिक घट्ने हावा ब्लास्टले सवारी थकान कम गर्दछ। यो सजिलो छ। चाहे यो लामो आइतवार क्रूज हो वा एक हप्ता लामो यात्रा, सतर्क रहनु र काठीमा राम्रोसँग कन्डिशन्ड राख्नु तपाईलाई एकै टुक्रामा आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न मद्दत गर्दछ। Incmented w मा ...
फिचर गरिएका उत्पादहरू - साइटम्याप मोटरसाइकल रोड पेडलहरू, मोटरसाइकल ग्यास पेडल, प्यूजोट जाj्गो स्कूलब्याग र्याक, मोटरसाइकल रोड साइकलिंग पेडलहरू, मोटरसाइकल मिश्र धातु पेडल, मोटरसाइकल फुट क्लच पेडल,